Israel oo wasiirka arimaha dibada Sweden mamnuucday | Somaliska
Israel oo wasiirka arimaha dibada Sweden mamnuucday
Dowlada Israel ayaa wadankeeda ka mamnuucday wasiirka arimaha dibada Sweden Margot Wallström ka dib markii ay ka xanaaqeen hadalo ay jeedisay wasiirka. Dowlada Israel ayaa ka carootay markii wasiirka arimaha dibada ay sheegtay in baaritaan lagu sameeyo dilalka ay Israel u geysato falastiiniyiinta.
Dowlada Israel ayaa sidoo kale cabasho u gudbisay safiirka Sweden u fadhiya wadankaasi. Israel ayaa sheegtay in siyaasiyiinta kale ee Sweden ka socota ay imaan karaan wadankooda balse wasiirka arimaha dibada aysan soo booqan karin, iyagoo ku tilmaamay Margot Wallström in ay tahay haweeney Yuhuuda neceb.
Maadaama Margot Wallström laga mamnuucay in ay booqato Israel ayaysan awoodi doonin in ay booqato Falastiin maadaama ay Israel maamusho xuduudaha laga soo galo.
Ma u aragtaa Sweden wadankaaga?
Video: “Daroogo ayuu i siiyay ka dibna waa i kufsaday oo sawiro ayuu iga qaaday”
Stefan Lövfen oo cambaareeyey muhaaradkii ay cunsuruyiintu dhigeen
Qolyihii labada sano ka sheekayn jiray baryahaa lama arag commentigooda ee ma xeerkii cusbaa ayaa qabtay tallow 🙂
nagas nool waaye Israel abaa nacayee